नयाँ दुई प्रजातिका चरा भेटिए - Sankalpa Khabar
4. जेठ १३ गतेदेखि एसईई परीक्षा सञ्चालन हुने
5. कांग्रेसले तत्काल एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैसँग तालमेल नगर्ने, यस्तो छ रणनीति
५ माघ १८:५९
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा नयाँ दुई प्रजातिका चरा भेटिएका छन् । ती चराहरु अघिल्ला वर्षहरुमा भेटिएका थिएनन् ।
बर्ड एजुकेशन सोसाइटीका पूर्वअध्यक्ष वासु बिडारीका अनुसार यस वर्ष भेटिएका चरामा डोनलिन र नर्थेन ल्याकुन रहेका छन् । डोनलिन माडीको रिउ खोला र ल्याकुन दिव्यनगरको फार्मल्याण्डमा भेटिएको उनले जानकारी दिए । गत वर्ष देखिएका चार प्रजातिका चरा भने यस वर्ष देखिएनन् । यस वर्ष नयाँ दुईसहित ५३ प्रजातिका पानी चरा भेटिएका हुन् । गत वर्ष ५७ प्रजातिका चरा भेटिएका थिए ।
यस्तै गत वर्ष भेटिएका एभोसेट, हुग्लिगल, उटस्यान्ट पाइपर, ग्रेल्याकुम, प्यासिफिक गल्डेन प्लोओर र ब्ल्याक हेडेड इडिस भने यस वर्ष नभेटिएको बिडारीले बताउनुभयो । यस क्षेत्रमा १६० प्रजातिका पानी चरा भेटिने गरेको तथ्याङ्क छ । हाल भेटिएका नयाँ चरा पनि अघिल्ला वर्षहरुमा भेटिएका चरामा पर्दछन् । नेपालमा पानी र बाहिर क्षेत्रमा गरी कूल ८८७ प्रजातिका चरा पाइन्छन् । तीमध्ये चितवन मात्रै ६४१ प्रजातिका चरा पाइन्छन् ।
नेपालका निकुञ्ज र चरा पाइने ठाउँमा जनवरी २ तारिखबाट चरा गणना थालिए पनि यहाँ १० तारिखबाट मात्र चरा गणना गरिएको थियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यस आसपासका नदी, तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्रलगायत विभिन्न ठाउँमा चरा गणना गरिएको थियो ।
नेकपा एकिकरणपछि निर्वाचित विद्यासहित अन्यकाे हैसियत अब के ?
२४ फाल्गुन ०६:५२
१९ फाल्गुन १८:३५
१९ फाल्गुन ०६:३०
२० फाल्गुन ११:१९
माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक पेरिसडाँडामा, बादलसहितका नेता गएनन्
२५ फाल्गुन १४:३४
२५ फाल्गुन १४:२६
नेहा र विनिभ मिष्टर एण्ड मिस प्लस टु आइकन
२५ फाल्गुन १४:१०